I-Wulfenite, ephuma eMadagascar / ekhokelela kwi-molybdate amaminerali PbMoO4 / Ividiyo
IWulfenite, esuka eMadagascar
I-Wulfenite iyinxalenye ye-molybdate yamaminerali kunye ne-formula PbMoO4. Iyakwazi ukufunyanwa rhoqo njengamaqabunga amancinci angqambileyo obomvu obomvu obomvu ukuya kumbala ophuzi-oluhlaza, ngamanye amaxesha omnyama, nangona umbala ungatshintsha kakhulu. Ngefomu layo eliphuzi ngezinye iixesha libizwa ngokuthi "i-yellow lead ore".
I-crystallizes kwinkqubo ye-tetragonal, edlalwa njenge-stubby, ipramramidal okanye i-crystal crystals. Kwenzeka kwakhona njengabantu abaninzi emhlabeni. Itholakala kwiindawo ezininzi, ezidibaniswa ne-ores ehamba phambili njengemaminerari yesibini ehambelana nommandla we-oxidized of deposit deposits. Kwakhona i-ore yesibili ye-molybdenum, kwaye ifunwa ngabaqokeleli.
I-Wulfenite yaqale ichazwa kwi-1845 ngenzeka kwi-Bad Bleiberg, eCarinthia, e-Austria. Kwabizwa ngokuba nguFranz Xavier von Wulfen (i-1728-1805), i-Austrian mineralogist.
Iyenzeka njengemaminerari yesibini kwiifomethi ezikhompyutheni ze-hydrothermal. Iyenzeka nge-cerussite, i-anglesite, i-smithsonite, i-hemimorphite, i-vanadinite, i-pyromorphite, i-mimetite, i-descloizite, i-plattnerite kunye neentsimbi ezahlukeneyo kunye ne-manganese oxides.
Indawo ephawulwe kuyo i-wulfenite yiMigodi yeMvu ebomvu e-Arizona. Amakristali abomvu obomvu nombala kwaye ngokuqhelekileyo akhiwa kakuhle. Indawo yaseLos Lamentos eMexico yayikhiqiza iincinci ze-orange ezincinci.
Enye indawo i-Mount Peca eSlovenia. Amakristal aphuzi, ngokuqhelekileyo aneepramamidi eziphucukileyo kunye ne-bipyramids. Kwi-1997, i-crystal iboniswe kwisitampu sePost Slovenia.
Iindawo ezisezantsi zaziwa nge-wulfenite ziquka: uSherman Tunnel, iSt Peter's Dome, i-Tincup-Tomichi-Moncarch izithili zemigodi, Ukuziphakamisa kweMelika kunye ne-Bandora kwi-Colorado.
Amakristal amancinci akhona naseBulwell naseKirk eAshfield, eNgilani. Ezi kristali zenzeka kwi-galena-wulfenite-uraniferous hoferzon horizontal kwi-calestine yamalone. I-wulfenite efunyenwe kule ndawo ifana neendawo (ukulandelelana kweparagenetic, i-silver ephantsi kunye ne-antimony ezibhalwe kwi-galenas kunye nokungabikho kwe-pyromorphite) ukuya kwi-wulfenites ye-Alps kwaye inokuvela kwimvelaphi efanayo.